हरि पौडेल , (नेदरल्यान्ड)
जिन्दगी मशीन भएछ, रफ़्तारको के कुरा गरूँ ?
लुट्ने प्रवृति बढ्दै गएछ, प्यारको के कुरा गरूँ ?
तिर्थै गएर हुँदैन धर्म, शिष्टाचार हराए पछि
गंगा आफै बनाएछन् मैलो, हरिद्वारको के कुरा गरूँ ?
न कर्मचारी सुकर्मी भए, न न्यायाधीश न्यायी भए
राजनीति गन्हाइ सकेछ, सरकारको के कुरा गरूँ ?
छोरा जान्छु विदेश भन्छ, श्रीमतीको कचकच सँधै
दिनभर गोरु जस्तै जोतिनु छ, घरबारको के कुरा गरूँ ?
तेरो मेरो भनि जनता लड्दैछन्, पहाड़ तराई छुट्टीदै
सयौं थुंगाको फूल हौं भन्छन, बेकारको के कुरा गरूँ ?
हप्ता भरी चाकरीमा बित्छ, साहबहरुको सेवा गर्दै
एकदिन छुट्टीमा घरको गनगन, शनिवारको के कुरा गरूँ ?
अन्नदाता कै बढि वर्णन हुन्छ, पत्रपत्रिकामा जहिले पनि
सत्य कुरा अब लेख्न छाडे, पत्रकारको के कुरा गरूँ ?
वास्तविक खबर बेखबर छन्, ल्याउनाले चटपटे खबर
सनसनीखेज नै खबर भए, अखबारको के कुरा गरूँ ?
कंश यहिँ रावण यहिँ कलियुगका छन मेनका यहिँ
पशुपतिनाथ भांग पिई मस्त, अवतारको के कुरा गरूँ ?
चाकरी गरी बिदेशीहरुको, आफुलाइ भन्छन वीर हरे !
नेपालीहरुको खुकुरी खिएछ, हतियारको के कुरा गरूँ ?
जड़ी बुटी जलस्रोत शक्ति, कच्चा पदार्थ सबै छन यहिँ
युवाशक्ति काम खोज्दै बिदेशिए, रोजगारको के कुरा गरूँ ?
नेपालको बास्तबिकतालाई गजल मार्फत सुन्दर ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । हरी जी लाई मेरो शुभकामना ।।
काफिया दोष देखियो l